Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Dusan Tadic Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha ya "Onye na-akpọ Denigrator". Ihe omuma nke Dusan Tadic Ụmụaka Akụkọ nke a na-eme ka ị nweta akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere nkà ọgụgụ isi ya dịka onye na-ebuso onye na-egwupụta egwu. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Dusan Tadic Biography nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Dusan Tadic Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu- Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Dusan Tadic mụrụ na 20th ụbọchị nke ọnwa 1988 nne ya, Marija Tadić na nna, Petar Tadić na Bačka Topola, Serbia. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna ya mara mma.
Ndị nne na nna Dusan Tadic; Petar na nwunye ya ọ hụrụ n'anya Marija malitere ndụ dị ka ndị ọrụ ugbo ma nwee obi ụtọ na-arụ ọrụ ezinụlọ ezinụlọ. N'agbanyeghị na a mụrụ na Serbia, ezinụlọ Dusan nwere ndị nna nna ha si Hungary. Taa, ndị Hungary nwere ihe karịrị ọkara nke ndị bi na Bačka Topola na Serbia.
Na-eto eto, Dustan eleghị anya na-azụ ọrụ site na ugbo, oke ohia, ịkụ azụ ma ọ bụ Ngwuputa. Ọ hụrụ football dị ka ụzọ mgbapụ ya. Dusan malitere site n'egwuregwu football na nwanne ya na ndị enyi ya. Mgbe ọ bụ nwa okoro, o mere ihe efu Thierry Henry o nwekwara ebe dị nro maka Arsenal. N'uhuruchi ndị ahụ na-arụ ọrụ n'ógbè ahụ na-akwụ ụgwọ nke ọma ka ọ nọ n'etiti mmadụ ole na ole họrọ mgbe ya na ndị òtù egwuregwu football ya, TSC Bačka Topola, na-agba ọsọ.
Dusan Tadic Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu- Ndụ Ndụ Mmalite
Dušan Tadić etolitewo nkà ya n'oge ntorobịa n'òtù obodo ya AIK Baca Topola. Ọ na-enwe obi ụtọ n'oge nwata na klọb ma nọgidere bụrụ onye kachasị mma n'oge ọgbọ.
Ọ bụ ọchịchọ ka ndị ọ bụla na-eto eto na-enwe nrọ nke igwu egwu na nnukwu klọb na obere Dusan abụghị otu. Mkpebi ya mere ka ndị ọzọ na-eto eto, Vojvodina nweta ihe n'afọ 2006. Vojvodina bụ ụlọ egwuregwu football nke dị na Novi Sad, obodo nke abụọ kasị ukwuu na Serbia na ebe a na-elekọta ihe n'obodo obodo Bačka.
"Novi Sad bụ obodo mara ezigbo mma na ụlọ ịgba chaa chaa mma. Mt bụ otu n'ime ndị ọkachamara ntorobịa kachasị mma na Serbia. "" Dusan kwuru ozugbo ...
Dusan Tadic Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu- Ụzọ Ebube
N'oge na-adịghị anya, Dusan weere ọrụ nzọụkwụ ọzọ na mmepe ntorobịa Vojvodina nke hụrụ ya na ya na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ.
Mgbe na-egwu egwu Vojvodina, o nwetara ma nkwado mba na Europe, karịsịa mgbe ha na-egwu egwuregwu dị ka Atlético Madrid. Njupụta dị otú ahụ nke Europe gosipụtara mmetụta ya n'ahụ ìgwè ya. Tụkwasị na nke a, Dusan hụrụ onwe ya na-eduga ìgwè ya na abụọ Serbian Cup finals na oge 2006-07 na 2009-10 oge. Nke a na ndị si na European na-ekiri ndepụta ha.
Mgbe ọ dị afọ 20, Dustan nwere ihe mgbaru ọsọ mbụ ya na 2009-10 UEFA Europa League. Ná ngwụsị oge ahụ, ọ chọtara onwe ya FC Groningen na Netherlands.
Dusan Tadic Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu- Bilie na-ewu ewu
Dusan amaliteghị ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụrụ na ọ rutere na Netherlands. Ọ bụ n'ụzọ nkịtị ka ọ na-enyere eze aka.
Ị maara?… Dusan nwetara otu onyinye Europe maka ọnụ ọgụgụ kasị elu nke atọ na-enyere aka na Europe na oge 2010-11. Ọ nọ n'azụ Lionel Messi (25 na-enyere aka) na Mesut Özil (26 na-enyere aka).
Nke a na ìgwè ndị nwere mmasị na ya na nnyefe na Twente bịara na 2012. Mgbe ọ nọ na klọb ahụ, Dusan dị njikere ịgba egwu na egwuregwu nke Premiya. Ịhụ ụzọ e si Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain na-agagharị na ya hụrụ n'anya Arsenal kpaliri ya oke maka Southampton FC. Tadić ghọrọ onye mbụ bịanyere aka n'akwụkwọ n'okpuru Ronald Koeman na 8 July 2014.
N'ụzọ doro anya, ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka Southampton ghọrọ ihe mgbaru ọsọ na-emeri megide Arsenal na 2014. Nke a mere ka ọ dị njikere ịhụ nkwekọrịta 4 afọ ya na ndị Senti bụ ndị ndị ha hụrụ ya n'anya na ekele maka abụ Dusan Tadic. Lelee vidio dị n'okpuru ebe a;
Owuwu Ulo Ozo:
Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, Dusan ghọrọ onye na-eto eto kachasị mkpa na mba ya ma nke a dugara n'enye mba (Ezigbo ndị Serbian footballer 2016).
"Ụbọchị dị mkpa nye m. Oge iji cheta ", Dusan kwuru ozugbo ọ natara ndị na-agba ọsọ Serbia nke afọ.
Ichekwa ndị nsọ site na Relegation:
N'ịbụ onye na-akwado ọdịmma mba ya, Dusan ghọkwara onye nchịkọta akụkọ maka ndị nsọ dị ka ọ dịbu mgbe ọ natara ọkwa Premier League maka ọtụtụ enyere (4) n'otu egwuregwu.
N'ụzọ dị mwute na afọ ikpeazụ nke nkwekọrịta ya, Dusan hụrụ onwe ya na ndị otu ya na-agbasi mbọ ịme ka ụlọ ọrụ ahụ nwee njikọ. Nke a bụ oge ọ ṅụrụ yi naanị ogologo ọkpa ma ọ bụrụ na a na-ejide ọnụnọ nke otu ọkwá. N'ikpeazụ, ọ mere. Dusan Tadic mezuru nkwa ya mgbe o meriri agha ahụ.
Na June 2018, Dusan nọ na Ajax ebe ọ nọgidere na-enwu. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Dusan Tadic Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
Dusan Tadic bụ otu n'ime ndị na-agba ọsọ ụkwụ nke ndị ọhụụ ha na-agbapụ nyocha anya ọha na eze nanị n'ihi na ndụ ịhụnanya mbụ ya enweghị onwe ya. Dusan n'afọ 2013 lụrụ nwunye ya ọ hụrụ n'anya, bụ Dragana Vukanac.
Banyere 2018, di na nwunye ahụ gọziri ụmụ atọ; Vasily, Veljko, na Tara. 5 afọ si na 2018 ma na-agụta, alụmdi na nwunye nke Dusan na Dragana dị nnọọ nkwụsi ike na enweghị nrọ nke ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ nkewa.
Ihe nzuzo nke alụmdi na nwunye ha bụ na Dragana Vukanac nke ọtụtụ ndị kọwapụtara dị ka nwanyị.
Dragana Vukanac emeela ihe nile n'ime ike ya iji gbaa di ya Dusan ume. O nwere ike ọ gaghị adọrọ mmasị dịka WAG ndị ọzọ na-agba bọsbụ ma o doro anya na ọ na-eme onwe ya ka ọ bịaruo nso na-eme ka nwoke ahụ nwee obi ụtọ.
Dusan maara na ọ dịkarịa ala, otu n'ime ụmụ ya ga-agbaso nzọụkwụ ya.
Dusan Tadic Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu- Ndụ nke Onye
Ịmata ụdị ndụ Dusan Tadic nwere ike inyere gị aka ịchọta ya. Malite na, ọ mara mma ma nwee ụdị Alvaro Morata Spanish anya.
Tadic dị nnọọ jụụ n'ụzọ nke fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị irè. Ọ nwere àgwà dị egwu nke na-egosi na ọ dịghị ihe zuru ezu iji kpasuo ya iwe ma ọ bụ mebie ọnọdụ ya.
N'ịbụ onye si n'egwuregwu football, Dusan na-ahụkarị n'ụlọikpe basketball na ezigbo ndị enyi ya. Dị ka bọlbụ, ọ na-agbasokwa bọmbụ nke bọl na Serbia.
Na-ekwu okwu maka NBA, Dusan bụ onye na-egwu Lakers na ọkpa kachasị amasị ya Lebron James.
Dusan Tadic Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Akụkọ Eziokwu- Ezigbo Ihe Ọrụ
"O siri ike ile nwa gị anya dina na ọdọ mmiri ya."Mama Dusan Mama Marija na-eti mkpu ma na-eti mkpu n'ụlọ, "Enweghị m ike ịkụda ya ala, n'ikpeazụ, ọ ghaghị ịṅụ Bensedin iji gbochie ụjọ ya" Nna Tadic Petar gwara akwụkwọ akụkọ Serbian SportBlic. Okwu ahụ mere mgbe nwatakịrị nwetara ihe ịma aka site na Wales nke fọdụrụ na Taylor.
Dị ka a na-ahụ site na vidiyo dị n'okpuru, ọ bụ oge jọgburu onwe ya nke mere ka ndị niile nọ na Dustan Tadic Family tinyere ndị mụrụ ya nọ n'ụlọ ha na Backa Topola na-ele egwuregwu ahụ.
"Kama nke"mkpọrọ"Taylor enwetaghị kaadị edo edo, na Joe Ledley na Garrett Bale ọbụna na-amụmụ ọnụ ọchị ajọ omume. "Ka nna Dusan kwuru.
Ozugbo ihe merenụ gasịrị, papa Dusan Petar na ụfọdụ ndị ikwu ya chọrọ ịnọdụ ala na ụgbọ elu ụgbọelu mbụ na Cardiff maka mmeri na ndị ọchịchị football Welsh ma nwee ike gbuo Taylor.
N'ezie, dị ka Tadic na-agwọ, nsogbu ya abụghị banyere ihe mgbu ma ọ bụ ọbara na-agbanye n'imi ya, ma na nwunye ya na ụmụ ya nke ọ na-elegide ya anya mgbe anya na-ele ha.
Nrụgide na akwara niile si n'ezinụlọ Dusan Tadic dị jụụ mgbe nna ya kpọsịrị oku nkeji abụọ mgbe egwuregwu ahụ rute n'ọnọdụ ahụ.
- M na-ajụ ya, "Olee otú imi gị dị? ma gwa ya banyere atụmatụ m maka mmeri"Nwa m nwoke wee sị: "Ka papa, biala Wales. A ga-agwọ m ahụ ".
Onye nkụzi Serbia, bụ Muslin, mesịrị gwa nna ya ka ọ dị jụụ na ọ rịọrọ Dusan ka ọ pụọ n'olulu ahụ ma ọ jụrụ, na-ekwusi ike na nwa ya nwoke agha ga-anọgide na-egwu.
"Ọ gwara m na m nwere nwa nwoke bụ ezigbo dike n'ọhịa." Petar kwuru.
Na-ekwu aha ya:
Ndi ama ama? ... Ndị Bekee kpọrọ aha mbụ ya n'ezoghị ọnụ site na ya na ndị nsọ. Tadic n'onwe ya anaghị ewe iwe. Kama nke ahụ, ọ na - achịkarị ọchị ma kwuo na "Dushan"Bụ ụzọ ziri ezi isi kwuo aha ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Dusan Tadic Childhood nke ọma na akụkọ na-adịghị mma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile
Sebian Football Diary
Lasse Schone Childhood Plus Plus